Akụkọ - Mexico International Auto Parts Expo 2020
Aha Ngosi: Mexico International Auto Parts Expo 2020
Ngosi oge: Julaị 22-24, 2020
Ọnọdụ: Centre Banamex Exhibition Center, Mexico City
Central America (Mexico) International Auto akụkụ na mgbe ahịa ngosi 2020
Ngosi oge: Julaị 22-24, 2020 (otu ugboro n'afọ)
Onye nhazi: Ngosi Frankfurt (USA) Ltd.
Ihe ngosi Frankfurt (Mexico) Limited
Dịka ihe ngosi kachasị ukwuu na nke kachasị mkpa na Mexico na Central America mgbe ahịa gachara, 20 International International Auto na mgbe ngosi ngosi nke Central America (Mexico) ga-enwe na Banamex Exhibition Center, Mexico City site na July 22 ruo 24, 2020. Enwere ndị ngosi karịrị 500 sitere n’akụkụ ụwa niile, gụnyere ndị si Argentina, China, Germany, Turkey, United States na Taiwan. Ihe karịrị ndị ọbịa 20000 sitere na ụlọ ọrụ ụgbọ ala bịara leta.
Ndị na-eme ihe ngosi nwere afọ ojuju na nsonaazụ nke ihe ngosi ahụ, nke gosikwara mkpa Automechanika Mexico na ụlọ ọrụ ahụ. Ọzọkwa, ihe nkiri ahụ aghọwo ikpo okwu kasịnụ maka ijikọ ndị isi na-eme mkpebi n'ahịa ụgbọ ala na Mexico na Central America.
N'ime ụbọchị ngosi atọ ahụ, ndị na-eme mkpebi isi site na ụlọ ọrụ akụkụ site na Mexico, Latin America na mba ndị ọzọ nọ ebe a ịchọta ngwaahịa kachasị elu, ọrụ yana mmekọrịta ụlọ ọrụ intra, ghọta mmepe nke ahaziri iche nke ụgbọ ala ma gbasaa azụmahịa ha.
China na Mexico bụ mba abụọ na-emepe emepe na mba ndị dị mkpa na-apụta. Ha abụọ nọ n'ọnọdụ dị oke egwu nke mgbanwe na mmepe. Ha na-eche ọrụ na nsogbu ndị yiri ya ihu, mba abụọ ahụ na-enyekwa onwe ha ohere mmepe. Na November 13, 2014, Onye isi ala China bụ Xi Jinping sooro onye isi ala Mexico, PEIA nwere mkparịta ụka na nnukwu Halllọ Nzukọ nke ndị mmadụ. Ndị isi obodo abụọ ahụ setịpụrụ ụkpụrụ na ụkpụrụ maka mmepe mmekọrịta ndị China Mexico, wee kpebie ịmepụta ụkpụrụ ọhụụ nke "otu abụọ na atọ" imekọ ihe ọnụ iji kwalite mmepe nke China Mexico usoro mmekọrịta zuru oke.
Mexico bụ otu n'ime mba nwere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke nkwekọrịta ahia n'efu na ụwa. Ndị ụlọ ọrụ dị na Mexico nwere ike ịzụta akụkụ na akụrụngwa sitere n'ọtụtụ mba, ma na-enwekarị ọgwụgwọ na-enweghị ụtụ isi. Ulo oru zuru oke onu ahia NAFTA na ihe ndi choro. Mexico na-a attentiona ntị na mmepe dị iche iche nke mmepụta na ọrụ ọrụ, wee nwee mmekọrịta mmekọrịta nke ọma na Europe, Asia na Latin America site na nkwekọrịta azụmaahịa na nkwekọrịta na ụlọ ọrụ akụ na ụba.
Na Latin America, Mexico abanyela na nkwekọrịta azụmahịa na-anaghị akwụ ụgwọ (TLC) na Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Chile, Nicaragua na Uruguay maka ngwaahịa na ọrụ ya, wee bịanye aka na nkwekọrịta nkwekọrịta akụ na ụba (ACE) Argentina, Brazil, Peru, Paraguay na Cuba.
Ndị bi na ihe dị ka nde 110, Mexico bụ ahịa nke abụọ kasị ukwuu na Latin America na otu nke kasị ukwuu n'ụwa.
Igwe akụrụngwa bụ ngalaba nrụpụta kasịnụ na Mexico, na-atụle 17.6% nke ngalaba nrụpụta ma na-enye 3.6% na GDP nke mba ahụ.
Mexico bụ Cosmos nke Mexico, Mexico bụ mba nke anọ kachasị na mbupụ ụgbọ ala karịa Japan, Germany na South Korea. Dabere na ụlọ ọrụ akpaaka nke Mexico, na 2020, a na-atụ anya Mexico ịbụ nke abụọ.
Dabere na data nke Mexico Automobile Industry Association (AMIA), ahịa ụgbọ ala Mexico gara n'ihu ịrị elu na October 2014, yana mmepụta, ire ahịa na mbupụ nke ụgbọ ala ọkụ. N’ọnwa Ọktọba afọ a, mmepụta nke ụgbọ ala ọkụ na Mexico ruru 330164, mmụba nke 15.8% karịa otu oge nke afọ gara aga; n'ọnwa iri mbụ, mbido mba ahụ ruru 2726472, mmụba nke 8.5% kwa afọ.
Mexico abụrụla onye nke ise kachasị na-ebubata ngwa ngwa na akụrụngwa, yana ngwaahịa ya na-ebuputara na ụlọ ọrụ mgbakọ ụgbọala na Mexico. Ntụgharị afọ gara aga ruru ijeri $ 35, na-egosipụta ikike nke ụlọ ọrụ akụkụ ụgbọ ala, nke ga-eme ka ndị na-eweta ngwaahịa mba ahụ kwalite. Ka ọ na-erule ngwụsị afọ gara aga, ọnụahịa mmepụta nke ụlọ ọrụ akụkụ ahụ mapụtara karịrị 46%, ya bụ, US $ 75 ijeri. A na-eme atụmatụ na ọnụ ahịa mmepụta nke ụlọ ọrụ ahụ ga-eru US $ 90 ijeri n'ime afọ isii sochirinụ. Dị ka ndị ọchịchị si kwuo, ngwaahịa 2 na ọkwa 3 ngwaahịa (ngwaahịa ndị na-adịghị mkpa ka e kee ha, dịka kposara) nwere atụmanya mmepe kachasị ukwuu.
A na-eme atụmatụ na site na 2018, mmepụta ụgbọala kwa afọ nke Mexico ga-erute nde ụgbọala 3.7, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke mmepụta na 2009, na ọchịchọ ya maka akụkụ akpaaka ga-aba ụba nke ukwuu; n'otu oge ahụ, nkezi ndụ nke ugbo ala ụlọ na Mexico bụ afọ 14, nke na-ewepụtakwa ọchịchọ dị ukwuu na itinye ego maka ọrụ, ndozi na nnọchi akụkụ.
Mmepe nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala Mexico ga-erite uru ndị na-emepụta akụkụ akpaaka ụwa. Ruo ugbu a, 84% nke ụwa kacha elu 100 ndị na-emepụta akụkụ akpaaka etinyela ego ma mepụta na Mexico.
Nso nke exhibits:
1. Akụrụngwa na usoro: akụrụngwa akụrụngwa na akụrụngwa, chassis, ahụ, ike ụgbọala na usoro eletrọniki na ngwaahịa ndị ọzọ metụtara ya.
2. Ngwa na mgbanwe: ngwa ngwa na ngwa ngwa akpaaka, ngwaọrụ ndị pụrụ iche, ngbanwe ụgbọala, njikarịcha njiri mara nke ọdịdị engine, mmelite imewe, mgbanwe ọdịdị na ngwaahịa ndị ọzọ metụtara ya.
3. Mmezi na mmezi: mmezi ọdụ akụrụngwa na ngwaọrụ, mmezi ahụ na eserese usoro, mmezi ọdụ njikwa
4. Ya na njikwa: sistemụ njikwa ahịa ụgbọala na sọftụwia, akụrụngwa ule ụgbọala, sọftụwia njikwa ụgbọala na sọftụwia, sọftụwia ụgbọala na sistemụ yana ngwaahịa ndị ọzọ metụtara ya.
5. stationlọ gas na ịsa ahụ ụgbọ: ọrụ ụlọ ọrụ gas na akụrụngwa, akụrụngwa ịsa ahụ ụgbọ ala